Ngwa YouTube dị ugbu a na Amazon Fire TVs | Gam akporosis
N’ọnwa gara aga ka anyị gwara gị maka njedebe nke esemokwu n'etiti Google na Amazon, nke mere na ngwa gị kachasị eji eme ihe na nke a ma ama, YouTube na Amazon Prime, dị na ngwaọrụ na ọrụ ha dị iche iche. Ozugbo agha na-enweghị isi kwụsịrị, nke na-emerụ onye ọrụ ahụ, udo dị.
Awa ole na ole gara aga, Amazon kwadoro na ngwa ọrụ ọhụrụ nke YouTube dị maka Fire TV niile, gụnyere nke mbụ Fire TV Stick. N'ihi nkwekọrịta a, ndị ọrụ jiri Firefox gaa YouTube ugbu a agaghị eme ya ọzọ wee nwee ike ịnụ ụtọ ikpo okwu vidio nke Google n'ụzọ dị mma ma dị mfe.
Ma ihe na-akpali n'ezie banyere ozi ọma a bụ na ngwa ugbu a dị na ụdị Amazo Fire TVn, ebe ọ bụ na mgbe ọ malitere ya ọ bụ naanị dakọtara na ụdị kachasị dị iche iche, ọkachasị n'ụdị nke Amazon malitere na ọgbọ nke abụọ nke ngwaọrụ a na-ejikọ ọdụ ụgbọ mmiri HDMI nke telivishọn anyị.
N'ụzọ dị otú a, a na-enweta ngwa YouTube na 2nd na ọgbọ nke atọ TV ọkụ, yana Fire TV Cube, Fire TV Basic Edition na Toshiba, Insignia, Element na Westinghouse Fire TV Edition smart TVs. Ngwa Ọ dị site na ngwa ngwa ngwa Amazon.
Agbanyeghị, ngwa ndị ọzọ ka ga-abịa: Kidsmụaka YouTube na YouTube TV emebeghị ihe ịrịba ama ọ bụla nke mbata Yabụ, ndị ọrụ nke ọrụ abụọ a ga-eche ma ọ bụ jiri Firefox ọzọ, ọbụlagodi n'ihe banyere YouTube TV, ebe ọdịnaya nke egosiri site na YouTube Kids bụ naanị site na ngwa ahụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Ngwa YouTube dị ugbu a na Amazon Fire TV